टिचिङ अस्पतालले मुसा, उडुस, उपियाँ र साङ्ला मार्न आह्वान गर्‍यो बोलपत्र! - Naya Aawaj
३१ साउन। महाराजगञ्जको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले मुसा, उडुस, उपियाँ र साङला नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गरेको छ। अस्पतालले शुक्रबार प्रकाशित गरेको सूचनामा दर्तावाला फर्मबाट मासिक रूपमा के कति दररेटमा उक्त कार्य गर्न सकिने हो भनी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।
यो प्रस्ताव पन्ध्र दिनभित्र बुझाउनुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ। सूचनामा अस्पतालका विभिन्न विभाग, शाखा, वार्ड, ओपिडि, युनिट लगायतका ठाउँमा मुसा, उडुस, उपियाँ, साङ्ला लगायत नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएको जनाइएको छ।
‘मुसाले मेसिनहरूको तार काटेर हैरान पार्दो रहेछ,’ अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले भने, ‘जताततै उडुस, उपियाँ, साङ्ला पस्दा रहेछन्।’ टिचिङ अस्पतालमा एक जनालाई करिब ५५ हजार रूपैयाँ मासिक रूपमा दिएर यो कार्य गर्न लगाइँदै आएको थियो। यसपालि भने प्रतिस्पर्धा नै गराउन खोजेको उनले बताए। ‘एमआरआई, सिटिस्क्यानका तार मुसाले काट्ने गरेको छ। डाक्टर सुत्ने ठाउँमा, ड्युटी गर्ने ठाउँमा उपियाँ र उडुस आउने गरेका छन्,’ काफ्लेले भने, ‘नियन्त्रणका लागि भइरहेको उपाय भए पनि त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा कानुनसम्मत पनि हुने भयो भन्ने ठानेर हामीले सूचना निकालेका हौं।’
त्रिवि शिक्षण अस्पताल ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। ठूला-ठूला भवन र छात्रावास छन्। ती सबै ठाउँमा उडुस, उपियाँ, मुसा र साङ्लाले दु:ख दिने गरेका छन्।